Warshada iyo soosaarayaasha jumlada GQ-208 xarunta 'Antifreeze Agent' Gaoqiang
GQ-208 wuxuu ka kooban yahay qayb ka mid ah yareynta biyaha iyo noocyo kala duwan oo dabiici ah, qayb ka mid ah ka hortagga qaboojiyaha dabiiciga ah iyo qeybta xoogga hore. Badanaa waxaa loo isticmaalaa dhismaha jiilaalka dhammaan noocyada shamiitada lagu dhex rido, shubka hore. Tayada wax soo saarka ee JC475 iyo heerarka kale
1. Si wax ku ool ah u yaree barta barafka ah ee biyaha bilaashka ah ee la taaban karo si looga hortago dhaxan.
2.Ku dhiirrigeli fuuq-baxa shamiintada xaaladaha kuleylka hooseeya, hagaajiya awoodda hore ee la taaban karo, kordhinta awoodda caabbinta dhaxan
Waxay leedahay astaamaha xoogga hore, kor u qaadista, yareynta biyaha iyo qaboojinta hawada. Waxaa loo isticmaali karaa inuu noqdo wakiilka xoogga hore.
4.Ku wanaaji sifooyinka jireed iyo farsamo ee la taaban karo, hagaajinta tusmada cimri dherer
1.Waxaa ku habboon dhismaha jiilaalka dhammaan noocyada shamiitada-dhexdeeda, shubka hore, dhammaan noocyada hoobiye, iwm
Waxaa loo isticmaali karaa xilliga qaboobaha ee waddooyinka, garoomada diyaaradaha, Buundooyinka, quwadda korontada, daryeelka biyaha, dekedaha iyo mashaariicda dhismaha madaniga iyo warshadaha.
3.Waxaa lagu dari karaa wakiilka biyaha yareeya si loogu diyaariyo shubka caaga ah iyo bamka laamiga
4.D3 waxay khuseysaa dhismaha hoosta xaaladaha cimilada iyadoo heerkulka lagu sheegay yahay -15 ℃ ama heerkulka dabiiciga ah ee aan ka hooseyn -20 ℃; D4 wuxuu ku habboon yahay dhismaha xaaladaha cimilada leh heerkulka lagu sheegay -10℃ ama heerkulka dabiiciga ah ee aan ka hooseyn -15 ℃
Qiyaasta: budada 2.0 ~ 3.0%; Dareeraha wuxuu ahaa 2.0 ~ 3.0% (waxaa lagu xisaabiyaa wadarta guud ee walxaha sibidhka).
Budada ayaa lagu dari karaa qasiyaha si wadar ah wadarta; Dareeraha ayaa lagu qasi karaa biyo isku qasan, si habboon u kordhi waqtiga isku darka. Biyaha kulul waa in loo adeegsadaa goobta dhismaha halka ay xaaladuhu saamaxayaan.
Isugeynta laguma qasmi doono baraf, baraf, koox qabow, iwm, wadar ahaana waa la sii kululeyn karaa haddii xaaladuhu saamaxaan.
Xilliga jiilaalka la taaban karo ee dhismaha marka lagu daro wakiilka ka hortagga qaboojinta isla waqtigaasna weli waa inuu si adag u fuliyaa "xeerarka farsamada dhismaha xilliga qaboobaha", shubista shubka waa in lagu daboolaa filim caag ah, xoojiya dahaarka iyo dayactirka
Qiyaasta ugu habboon waa in lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo xaaladaha heerkulka iyo shuruudaha injineernimada kahor intaadan isticmaalin sheygan
Powder bac xirxirida xirxiraan bac, 50㎏/ boorso; Dareeraha durdurka, 250㎏/ durbaan ama gaadiid taangi weyn
Caddaynta qoyaanka, caddaynta heerkulka sare, caddaynta dhaawaca; Muddada ay shaqeyneyso waa 1 sano, ka dib marka uu dhaco, waa in lagu xaqiijiyaa baaritaanka in mar kale la isticmaalo
Badeecadani ma ahan mid ololi karta oo qarxin karta, si habboon u hayso.
Xiga: GQ-KG (L) / 01/02 Wakiilka Grouting Cable